बिल्कुल पेस्ट्री: डचटाउन व्यापार शोकेस - डचटाउनस्टा.लि.
डचटाउन व्यापार शोकेस: बिल्कुल पेस्ट्री
प्रकाशित जनवरी 27th, 2021
यो डचटाउन व्यापार शोकेस रिटर्न! हाम्रो भिडियो श्रृ series्खलाले तपाईंलाई डचटाउन भरका व्यवसायहरू र परिचय गराउने मानिसहरूलाई परिचय गराउनेछ। यस एपिसोडमा हामी पेस्ट्री शेफ क्रिस फिलिप्समा भ्रमण गरेका थियौं पूर्ण रूपमा प्यास्ट्री। एकदम Pastry मा स्थित छ शहरी Eats छिमेकी फूड हल डाउनटाउन डचटाउनमा।
बिल्कुल पेस्ट्री को बारे मा
१ 2019 Est मा स्थापित, बिल्कुल पेस्ट्रीले ब्रेकफास्ट पेस्ट्री, मफिन, कपकेक, कूकीज, र अन्य मीठा व्यवहार गर्दछन्। उनीहरूका धेरै वस्तुहरू केटो मैत्री वा शाकाहारी छन्। २०२० को गिरावटमा खोलिएको जुन उनीहरूको डचटाउन रिटेल स्पेसमा उपलब्ध प्रस्तावहरू बाहेक, उनीहरू पनि गर्छन् थोक बेकिंग सेन्ट लुइस क्षेत्रभरि कफी पसल र अन्य ग्राहकहरूको संख्या को लागी। थोक अपरेसन यस भन्दा बाहिर छ शहरी ईटमा साझा वाणिज्यिक रसोईघर.
समुदायको सेवा गर्दै
त्यस पछाडि, शेफ क्रिस र उनको छोरीहरू / व्यापार साझेदारहरू प्रस्ताव गर्दछ कोचिंग र संसाधनहरू अरूलाई पकाउने व्यवसाय सुरु गर्न मद्दत पुर्‍याउन। तिनीहरू न्याय सहित महिलासँग काम गर्छन् उनीहरूलाई पकाउने र व्यवसायिक सीप सिकाउन, र उनीहरूसँग साझेदार हुन्छन् गार्जियन एन्जिल र अन्य गैर-नाफा कोष जम्मा गर्न मद्दत गर्न।
एकदम प्यास्ट्री खोज्नुहोस्
उत्तम Pastry मा स्थित छ 3301 Meramec Street मा शहरी Eats छिमेकी फूड हल डाउनटाउन डचटाउनमा। ठाउँ पनि घर छ जुआनिटाको क्रियोल सोल क्याफे र टाकोस ला जेफा, साथ साथै पप-अप खाना कार्यक्रमहरू उनीहरूको केहि साझेदारी गरिएको किचेन साझेदारहरूको विशेषता प्रस्तुत गर्दै।
बुधवार, बिहिबार, र शुक्रवार बिहान साढे to:०० देखि अपरान्ह २ सम्म र शनिबार र आइतवार बिहान to देखि अपरान्ह २ सम्म बिल्कुल पेस्ट्री हेर्नुहोस्। तपाईं एकदम राम्रो प्यास्ट्री पनि फेला पार्न सक्नुहुनेछ फेसबुक, twitter, र इन्स्टाग्राम.
हामीले यात्रा गरेका डचटाउन ब्यापार शोकेसको अघिल्ला एपिसोडहरूमा लोगानका बच्चाहरूको पुन: बिक्रीको क्यासान्ड्रा लोगन र जुआनिटाको क्रियोल सोल काफेमा शेफ कर्टिस म्याककन। तपाईं हाम्रो र नयाँ र यी भिडियोहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ डचटाउनस्टाल यूट्यूब च्यानल (जस्तै र सदस्यता!)।
चिप स्मिथ अफ भिडियो फिल्मिing र निर्माण क्रस ग्रान्ड.
तल दायर गरिएको डचटाउन व्यापार शोकेस. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन, डचटाउन व्यापार शोकेस, र डचटाउन सीआईडी. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जनवरी 27th, 2021 .
DutchtownSTL.org डचटाउन व्यापार शोकेस डचटाउन व्यापार शोकेस: बिल्कुल पेस्ट्री